I-Raw YK-11 Powder (431579-34-9) Abavelisi-i-Phcoker Chemical
I-YK-11 powder ikwiqela labakhethiweyo be-androgen receptor (YK11 powder). Ngokusisiseko, into eyenziwa yiYK11 ikhetha ……
I-YW-11 powder (431579-34-9)
I-Raw YK-11 powder (431579-34-9) Inkcazo
I-YK11, ekwabizwa ngokuba yi-Myostine, ithathwa njengenye ye-YK11 powder enamandla kwimarike. Yimodem synthetor ekhethiweyo ye-androgen receptor. Iyeza elinomsebenzi we-anabolic kwi-vitro kwi-C2C12 myoblasts kwaye libonisa i-potency enkulu kune-dihydrotestosterone (DHT) ngokumalunga noku. I-YK11 ikwabizwa ngokuba yi-Myostatin inhibitor. banokukunceda ukuba ufumane umsipha kwaye ulahlekelwe ngamanqatha.
I powder YK-11 powder (431579-34-9) Suqobo
Igama lemveliso I-Raw YK-11 powder
Igama leKhemikhali YK11, (17a, 20E) -17,20 - [(1-Methoxyethylidene) bis (oxy)] - 3-Oxo-19-norpregna- 4,20-diene-21-carboxylic Acid imethyl Ester; YK11 ((17α, 20E) -17,20 - [(1-methoxyethylidene) bis- (oxy)] - 3-oxo-; DNA (Terrabacter uhlobo YK11 16S rRNA gene Isiqwenga); GenBank AB070463
Iqela leziyobisi YK11 powder
Inani leCAS 431579-34-9
I molecular Fi-ormula C25H34O6
I molecular WSibhozo 430.53386
IMasaisotopic Mass 430.236 g / mol
Ukuxuba Point 190-200 ° C
I-Biological Half-Life Iiyure ze-6-10, kuxhomekeke kumntu ngamnye
Sukufaneleka Propylene Glycol, i-DMSO, i-Ethanol
I-Raw YK-11 powder Aukuguquka I-Androgen Receptor Modulator, i-Myostatin Inhibitor
I-Raw Raw Raw Raw (11-431579-34) Inkcazelo
Abasebenzisi abaninzi bacinga ukuba i-YK11 yeyona nto iphambili yokuvula amandla omzimba opheleleyo kunye nokufezekisa ukuzuza ngokukhawuleza kwemisipha kunye nemiphumo emibi embalwa. Iphinde yatsho ukuba i-YK11 inamandla okunciphisa umsebenzi we-myostatin, ukuyenza i-myostatin inhibitor. Ngokuqinisekileyo i-YK-11 yenye yezona zomeleleyo zinamandla phaya. Awunakuthelekisa ngokwenene i-YK kwi-LGD-4033 okanye naziphi na ezinye iimveliso ngenxa yokuba yomelele kangakanani.
Nangona kunjalo, nangona i-YK-11 i-powder eluhlaza yomelele ngokumangalisayo ukugcina engqondweni ukuba kukho izifundo ezimbalwa ezenziweyo ngeli khomputha. Esi sesona sizathu siphambili uninzi lwabantu lubonakala ngathi kungcono luhambe nabanye abafana ne-Ostamuscle, RAD-140 okanye GW-501516.
I-YK11 ifumana inzalo kubakhi bomzimba ngenxa yesakhono sayo sokwakha ngokukhawuleza izihlunu ezinemiphumela emincinci.
Olunye uphando lweselula lubonisa ukuba i-YK11 ikhulisa ubunzima besisu. Abaphandi bafumanisa ukuba kwandisa iprotheni ye-follistatin (i-myostatin inhibitor).
I-YK11 inokuphucula impilo yeethambo. Kwiphononongo yeeseli zethambo, i-YK11 yandise amanqanaba eeprotheni zokwakha amathambo.
Abanye abakhi bomzimba abaye bazama i-YK11 ingxelo yeengxowankulu ezizuzayo zomzimba kunye nokulahlekelwa kweoli kunye nemiphumo emibi. Nangona kunjalo, ngoku akukho zilwanyana okanye izifundo zabantu ze-YK11 kwaye ukhuseleko lwayo alucacanga.
I-YK-11 powder (431579-34-9) Indlela yokusebenza
I-YK11 inomgangatho ofanayo weekhemikhali kwi-DHT kwaye oku kuboniswa ngendlela ebopha ngayo i-androgen receptors. Umzimba uvelisa i-DHT ngokwemvelo ngenjongo yokukhuthaza impilo ye-prostate, ukukhula kweenwele kunye nophuhliso olufanelekileyo lokukhula komntwana.
Abaphandi baqhube isifundo seeseli ukuze bafumene indlela isebenza ngayo ukwakha imisipha. Iziphumo zibonisa ukuba ihlose nje ukunyusa amanqanaba e-follistatin. I-follistatin enye into eyenziwa ngokwemvelo kwiprotheni emzimbeni womntu ekunceda ukugcina i-myostatin. I-Myostatin yi-hormone enomsebenzi wokunciphisa ukukhula kwemisipha engapheliyo.
Okwangoku, kuphela i-YK11 powder eluhlaza inokukwazi ukuvimbela i-myostatin.
Ubungqina obuninzi bubonisa ukuba i-YK11 inokukhuthaza nokukhula kwethambo ngokuphazamisa isango elisebenza njengeDHT.
benefits I powder YK11 powder (431579-34-9)
Ukwandisa Ubukhulu Bamascle
I-YK11 inamandla amangalisayo okukhuthaza ukukhula komsipha.
Kungenxa yokuba ngokwemvelo ukwandisa ama-follistatin amanqanaba abuye akhulise amandla akho omzimba wokuvelisa iiseli zamathambo. I-Follistatin nayo ixanduva lokunciphisa i-myostatin, ngaloo ndlela ukuvula ukuba kube lula ukukhula kwemisipha. Kodwa ukuba iziphumo zoluhlu lwabalandeli zivinjelwe naluphi na uhlobo, ngoko-ke i-myostatin inhibition ayikwazi ukuba yenzeke, eya kwenza uYK11 ingasebenzi.
Ukungazwili njengengxelo ephukileyo kodwa akukho zifundo zomntu okanye zezilwanyana ukubuyisela idatha kule ngxube.
Konke esinakho ubungqina be-anecdot based based on reviewing bodybuilder kwiifom ye-intanethi. Oko basitshelayo kukuba banako ukuphuculwa kwamanqatha amaninzi kunye ne-15 lbs ezizuzisayo zokuzuza izihlunu ezinomzimba ngexesha elifutshane.
◆ Yomeleza iiBones
Iihomoni zesondo zibalulekile ekugcineni amathambo omeleleyo kunye nasempilweni. Ubungqina obufumanekayo bubonisa ukuba i-YK11 powder eluhlaza inokunyusa amandla e-bone ngokubopha kwi-androgen receptors.
I-YK11 inokunyusa inani le-PKB esebenzayo (iprotheni kinase B) ekhoyo kwiiseli zomzimba eziququzelela ukukhula kweeseli zethambo.
Masingakulibali ukuba ufuna ukuqina, ukuxhamla imisipha kunye namathambo ukuze ugweme iziqhekeza. Inokukwazi ukuncedisa kulo mba ngokunjalo ngenxa yokuba isebenze kakhulu kwisakhiwo se-muscle, esondla impilo yeethambo kunye nokunciphisa imiphumo yesithambo.
I-powder YK-11 ephakanyisiweyo (431579-34-9) Isisombululo
Abakhi bomzimba abasebenzisa i-YK11 powder eluhlaza bathi ukuyithatha kwimithamo ye-10 ukuya kwi-15 mg ngemini isebenza kubo. Abanye baye baxela iimpembelelo ezilungileyo nge-5 mg ngosuku. Uninzi lwabasebenzisi lujikeleza kangangeeveki ezi-4 ukuya kwezi-8.
Iziphumo ezichaphazelekayo ze-Raw YK-11 powder (431579-34-9)
▲ Kuze kube ngoku, zifundo kuphela zezifundo ezenziwe kwi-YK11.
Akukho bungqina beklinikhi okanye uphando lwezilwanyana ukubuyisela nayiphi na ibango elenziwe malunga neziyobisi.
Oku kufuneka kukucinge kabini malunga nophando ngeli candelo. Mhlawumbi ufanele uhlolisise izixhobo ezahlukeneyo ezifana ne-Ostarine kunye neLigandrol. Unolwazi oluninzi kunye nophando olukhoyo.
Kuthiwa i-YK11 ingaba yityhefu kwisibindi. Ukuthetha ngokweengqondo, kunokuchaphazela ukukhula kweenwele, intambo yezwi, i-prostate impilo kunye nezinye izitho ezibalulekileyo emzimbeni.